Xoreynta & mideynta Wasiir Gallan ee gobolka Sanaag kabacdi Puntland maanta maxaa la gudboon? – Radio Daljir
Juunyo 3, 2019 6:12 g 0
Marka hore aan mid ku hormarno oo bayaamino. Wasiir Gallan waxaa uu jagada Wasiirka Amniga Puntland hayaa muddo ka yar afar bilood. Afartaas bilood Gallan waxa uu gaaray guul uusan hore gaarin Wasiir Amni oo abidan Puntland soo mara. Waxa uu gaaray guul Madaxweyne Gaas iyo Faroole midkoodna aysan maalin haweysan, maankana aysanba gelin. Waxa uu Wasiir Gallan qeexay oo warqad awal marnayd maanta ku bayaamiyey shaqada Wasiirka Amniga Puntland, oo hore u ahaan jirtay shaqo dayacan, haba ugu darnaato shantii sano ee Cabdiweli Cali Gaas iyo Wasiirkiisii Amniga iyo waliba kii Arrimaha Gudaha.
Aan ku xijinno in aynaan illoowsaneyn in siyaasiyiinta qaarkood ay marmar Gallan farta ku fiiqaan ayaga oo leh, “soo tii uu Madaxweyne Gaas qoriga u qaatay?” Haah oo waa xasuusannaa, oo xasuus kaliya ma aha e Radio Daljir waxa uu wagaas joogto waraysiyo uga qaban jiray Gallan. Madaxweyne Gaas oo ka xanaaqay waraysiyada ay Daljir la yeelato Gallan waxa uu muddo laba asbuuc ah albaabada isugu dhuftay Radio Daljir. Waa taariikhda markii ugu horraysay oo Radio Daljir albaabada la isugu dhufto. Danbiga kaliya oo Gaas uu Daljir ku eedeeyana waxa uu ahaa “sidee baad Gallan u waraysan kartaan?”
Raalli kama aynaan ahayn shalay, maanta kama nihin in saxaafadda la caburiyo oo xorriyadda laga qaado ayadoo awood dowlo loo adeegsanayo. Raalli kama aynaan ahayn in siyaasi Gallan loo diido in uu dowladdiisa mucaarado oo haddana madaafiic lala beegsado. Sidoo kale raalli kama aynaan ahayn in Gallan uu asna qori qaato. Laakiin nasiibwanaag, Gallan maanta waa Wasiirka Amniga Puntland meesha Gaas uu ka yahay Madaxweyne hore, sidaas darteed, far-fiiqa siyaasiyiinta qaarkood taariikhdaa ka jawaabtay.
Gallan & Bossaso
Dhanka waxqabadka, mideyntii 23kii Maarso 2019 Gallan mideeyey gobolka Sanaag kahor, Wasiir Gallan waxqabadkiisu waxa uu ahaa mid muuqda oo aad loo ammaanay, waxa uuna mudnaanta koowaad siiyey ammaanka Bossaso. Wasiirka oo la hadlaya shacabka Bossaso, lana qaybsanaya qorshihiisa sugidda amniga Puntland, waxa uu yiri, “waxa naga go’an in aan ku cibaadeysano shaqadayada dhexdeeda … Kitaab Jaamac baan gacanta saarnay, waxaan ku dhaaranay in aan danta dadka iyo dalka taayada kahormarino. In aanu dadka daacadnimo ugu adeegno.”
Dhammaan hadalada kore ee Wasiir Gallan waa kuwo ku cusub dhegaha shacabka Puntland, waa kuwo aan hore looga baran masuuliyiinta Puntland, waana kuwo ku cusub afka masuuliyiinta ammaanka Puntland.
Wasiir Gallan marna ma uu noqon sida wasiirada qaar oo baryo danbiile iyo wacdi shacabka ku dhegobeeliya ee waxa uu noqday wasiir fulin dowlo leh oo marnaba danbiilaha aan ka beryin in uu shacabka badbaadiyo. Waxa uu noqday wasiir danbiilaha xoog iyo xeeladba u adeegsada oo inta dhegta soo qabta danbiilaha sharciga la tiigsada. Laakiin haddana marna kama ay marneyn Wasiir Gallan in uu shacabkiisa la hadlo, uu gubaabiyo, asaga oo u sheegaya in ay sida isu dhaamaanna waxa uu yiri, “magaalada Bossaso marka loo eego magaalooyinka kale ee Puntland cabsidu waa ku badantahay. Ma dadka joogaa fulayo u badan? Ma la cabsi galiyey? Ma garan karo!”
Hadalkaas darti reer Bossaso heeryadii baqinta waa ay iska tuureen, Wasiir Gallan asna waxa uu u soojeestay in uu Sanaag heeryada ka rogo.
Sanaag Gallan Kahor
Gobolka Sanaag kahor tagitaankii Wasiir Gallan waxa uu ahaa gobol tafaraaruq hareereeyey. Waxa uu ahaa gobol ay Somaliland u matalaan horjoogayaal siyaasiyiin-isku-sheeg ah inta dadka reer Sanaag ugu liidata. Waxa uu ahaa gobol hoggaankiisa Puntland ayana aysan wax badin kala hagin. Gobolka Sanaag waxa uu shantii sano ee la soo dhaafay noqday gobol saraakiisha iyo siyaasiyiinta Soomaali-diidku markay rabaan yimaadaan, kay rabaan la qayilaan, kay rabaanna la casheeyaan.
Gobolka Sanaag waxa uu noqday gobol cuqaasha gobolka qaarkood loo yeeriyo, markii la rabana loo yeerto.Waxa uu noqday gobol markii Soomaali-diidku arkay in uu yahay gobol dadkiisu aysanba heeryada dhinac isaga rogin karin, in inta qoryo loo soo dhiibo la yiraahdo “Xingalool yaan la galin oo laga bixin … Yube sidoo kale … Damala Xagarre kii dhaqaaqa qoorta gooya!”
Intaas markii laga helayna waxaa xigtay “u diyaargarooba weerar Badhan!”
Sanaag Gallan Kabacdi
Taariikhda gobolku waa mid qoyan, umana baahna faahfaahin dheeri ah, oo sidii Wasiir Gallan looga bartay in dembiilaha iyo dhagar-qabaha uu dhegta u soo qabto oo uusan baryo ama wacdi la beegsan, ayaan afkiisana sidii uu Baran u galay aan laga maqal “walaalahayaga Somaliland,” meesha taas baddalkeeda uu si cad reer Sanaag ugu qeexay “Sanaag hadal uma baahna ee xoreyn bay rabtaa!”
Xoreyn kahor se waxaa xusid mudan in dagaalo kharaar oo sababay dhimasho, dhaawac iyo barakac kabacdi, uu wasiir Gallan galay Baran 21kii May 2019. Wasiirku waxa uu 22kii bisha la shiray maamulka degmada iyo kan gobolka. 23kii bisha waxa uu wasiirku iclaamiyey in gobolka Sanaag aysan laba calan ka wada lulan doonin. 24ka bisha illaa iyo 29kii Wasiir Gallan waxa uu mideeyey dhammaan ciidamadii gobolka oo dhan joogay, waxa uuna yagleelay hal hoggaan ciidan oo hoosyimaada Puntland. 30kii bisha May 2019 waxa uu Wasiir Gallan magaalada Ballibusle ku qabtay xaflaad ballaaran oo hal goob la isugu keentay nin-doorkii iyo ciidamadii difaaca Sanaag, halkaas oo lagu soo afmeeray khilaafkii gobolka Sanaag, laguna dallacsiiyey saraakiishii ka soo goostay maamulka Somaliland. Isla goobtaas waxa uu Wasiir Gallan iyo dhammaan wasiiradii Puntland ay ku iclaamiyeen in maamulka Puntland la gaarsiin doono magaalada Ceerigaabo.
Laakiin mar haddii Sanaag la xoreeyey, maamul Ceerigaabo la gaarsiiyo iyo mid degmo laga yagleelaaba waa hawl fikir, wada-tashi bulsho iyo meelmarin dowladeed aan looga maarmin.
Golaha Fulinta Gobolada (GFG)
Taariikhdan qoyan ee uu Wasiir Gallan ku muujiyey in muddo ka yar afar bilood uu ammaanka iyo midnimada Puntland gaarsiiyo heer aysan gaarin illaa iyo waayihii Cabdullaahi Yusuf waa mid bogaadin mudan. Waxaa sidoo kale bogaadin mudan in gobolka Sanaag Gallan kabacdi maanta yahay mid mideysan. Laakiin si mideynta iyo bogaadintu u noqota mid waarta, waa in aqoonyahanka iyo nin-doorka Sanaag iyo Haylaan ay hawsha kamid noqdaan.
Jirtaayo intaas, haddana taariikhdu waa mid xawli ku socota, waana mid u baahan hoggaan aqoon leh, karti leh, oo bulshada isbaddal-doonka ah ee gobolka hormar u horseedi kara. Sidoo kale isbadalada gobolada Sanaag iyo Haylaan ayana si ay u hanaqaadaan waa in Dowladda Puntland ay la timaado hindise maamul oo ka hanaqaada dhammaan magaalooyinka labada gobol, leh hiigsi dhow iyo mid fog, kuna salaysan siyaasad iyo shuruuc aan mugdi ku jirin, watana ciqaab adag oo looga hortago siyaasiyiinta u adeega aragtida iyo siyaasadda Soomaali-diidka.
Yagleelida Golaha Fulinta Gobolada (GFG) Sanaag iyo Haylaan waa tallaabo horseedi karta hormarka gobolku hiigsanayo, waana in Goluhu ka koobnaado rag iyo gabdho lagu soo xusho aqoon iyo karti. Ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu hiigsanayo Golaha Fulinta Gobolada waxaa kamid noqon kara:
Ciidan amni oo kaladanbeyn leh, la’aantiisna aan qodobada hoose midkoodna la hiigsan karin
Ciribtirka siyaasadda gurracan ee Soomaaliidka ee ku salaysan qaybi oo xukun oo abuur xaalado amnidarro
Maamul baahin degmooyinka labada gobol oo ku salaysan wadatashi baahsan
Hannaan hirgelin qorshe lagu hormarinayo ilaha dhaqaalaha ee labada gobol
Cayimid miisaaniyad dhaqaale oo lagu hirgaliyo hawladaha Dowladaha Hoose ee degmooyinka arradan si looga miradhaliyo hiigsiga yoolka ah helitaan ilo dhaqaale oo iskufilan
Xukuumadda Madaxweyne Deni tallaabo hormarineed iyo mid mideyn bulshaba waa ay hiigsatay, waa ay ku guulaysatay, waana hormar ku cusub gegiya Puntland; laakiin gobolada Sanaag iyo Haylaan oo hore u daycnaa, maanta ma ay aha laba gobol oo dayac sii socda u sii dulqaadan kara. Xorenyta gobolada Sanaag iyo Haylaan waa in ay la socotaa siyaasad hormarin dhaqaale iyo mid bulsho. Waana midda maanta looga fadhiyo Madaxweyne Deni iyo Dowladda Puntland.
Xoreynta & mideynta gobalka Sanaag kabacdi: Waraysi Kornayl Qolombi (daawo | dhegayso)